Guddiga wada-xaajoodka DF iyo Somaliland oo la kulmay golaha abwaannada | Caasimada Online
Home Warar Guddiga wada-xaajoodka DF iyo Somaliland oo la kulmay golaha abwaannada
Guddiga wada-xaajoodka DF iyo Somaliland oo la kulmay golaha abwaannada
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saakay ay kulan wada-tashi ah la yeesheen Guddiga wada-xaajoodka Dowladda Somaaliyeed iyo Somaliland golaha abwaannada Somaliyeed.
Kulankaan ayaa waxa uu ka mid yahay Kulamo usbuucyadii la soo dhaafay ay Guddiga wada-xaajoodka Dowladda Somaaliyeed iyo Somaliland la yeelayayeen in dhaha Bulashada Soomaaliyeed haday ahaan lahaayeem waxgaradka iyo dadka Ehelka u ah bulshada ay la yeelanayeen.
Sidoo kale kulankaan ayaa waxaa ka horeeyay wada-tashi ay la yeesheen madaxda jaamacadaha, bulshada rayidka ah, dhallinyarada iyo shakhsiyaad kale duwan ee xog-ogaal ah.
Guddiga wada-xaajoodka Dowladda Somaaliyeed iyo Somaliland oo uu ka mid yahay Dr C/raxmaan baadiyow ayaa sheegay in kulamada kale ay la yeelan doonaan dowlad Goboleedyada si ay ula kulmaan siyaasiyiinta, dhaqanka, aqoonyahaannada iyo bulshada rayidka ah.
Dr Baadiyow oo ka mid ah Guddiga ayaa u sheegay Bogan in ay Rajaynayaan iney urursado tallo loo dhanyahay oo keeni kara xal waara.
Dhinaca kale kulankaan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Gudoomiye guddiga wada-xaajoodka xildhibaan Cabdullahi sheikh Ismaciil iyo abwaanno ay ka midyihiin abwaan Shube, Cali dhuux, Maki Xaaji iyo kuwa kale oo halkaas ka hadla.